Nbudata NAVIC App 2022 maka gam akporo [Kacha ọhụrụ] - Luso Gamer
Nbudata NAVIC App 2022 maka gam akporo [Kacha ọhụrụ]
March 4, 2022 January 13, 2022 by John Smith
India bu obodo mepere emepe ebe ndi oru na aru oru dika nke azu. Fishinglọ ọrụ ịkụ azụ na-atụnyekwa ụtụ akụ na ụba India nke ukwuu. N'ịchọdo nchedo ndị ọkụ azụ, ngalaba steeti bidoro ngwa mkpanaka ọhụrụ a bụ NAVIC App.
Nkọwa nke NAVIC bụ Ntugharị na Indian Constellation. Nke pụtara na ọ bụ sistemụ ntugharị nke mepụtara maka geo-nkewa nke India. Organizationtù Na-ahụ Maka Nnyocha Ohere Ndị India na-achịkwa ma hazie. Ebumnuche ebumnuche nke imepụta ngwa a bụ iji kwado ndị ọkụ azụ.
Onye na-aga n'oké osimiri miri emi na-ebu obere ụgbọ mmiri maka ịchụ nta azụ. Mgbe anyị lere anya n’akụkọ ihe mere eme, ọtụtụ ndị ọkụ azụ jidere ndị otu na-agagharị n’oké osimiri, ọbụnakwa jidere ha maka ịgafe ókèala. Anszọ n'ihi ụkọ akụrụngwa ndị mmadụ na-agabigakarị oke iwu.
Agbanyeghị na ha anaghị agafe oke maka ebum n'uche ha. Mana ka ha na achu azu ya na enweghi ihe ndi ozo ndia, tinyere umu nwanyi. Ndị na-eri ego na-akpọ ndị na-ahụ maka ndị uwe ojii jidere ha.
N’ịtụle nsogbu ha na mmanye ha, ngalaba steeti gụnyere INCOIS, IRNSS na NAVIC. Ha kpebiri ịmepụta faịlụ Apk ọhụrụ a. Wụnye ngwa a ga-enye ọrụ nyocha nke Indian mapping duo ndị na-akụ azụ mgbe ha na-agagharị n'oké osimiri.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkụ azụ na-atụ egwu na ị ga-agagharị n'oké osimiri n'ihi enweghị akụ gụnyere map. Mgbe ahụ echegbula n'ihi na anyị na-atụ aro ka ị wụnye a App si ebe a. Kedu nke ga - eweta nhazi igodo niile dị mkpa mgbe ị na - eme njem.
Kedu ihe bụ NAVIC App
Dịka anyị kọwara na mbụ na ọ bụ ngwa Maapụ & Ntugharị ngwa ọrụ mepụtara maka ndị na-egbu azụ. N'ihi na ọtụtụ oge ndị ọkụ azụ na-agafe oke ahụ, ebe ha na-achụ azụ azụ n'ihi enweghị ego. Gụnyere nnweta nke maapụ emelitere.
Na-elekwasị anya na nchebe ha na enyemaka ndị mmepe ahaziri Apk ọhụrụ. Kedu nke bụghị naanị inye aka maka usoro njem ma ọ na-enyekwa atụmatụ pụrụ iche dị iche iche. Gụnyere Live Geo-location, Audio Visual Alert, SOS Emergency System, Ọnọdụ nke ebe mgbaghara dị elu na Map okporo ụzọ wdg.
Aha ngwugwu nweke.nke
Isi ihe ndị a kpọtụrụ aha bụ akụkụ bụ isi nke ngwa ahụ. Maka ịnweta atụmatụ ndị a niile, ndị na-akụ azụ ga-edebanye aha na ngwa. Na maka ndebanye aha, ọ chọrọ igodo nyocha nke nwere ike ịnweta site na ngalaba ndị metụtara ya.
N'aka na-enweghị ihe igodo Nyocha, ọ gaghị ekwe omume iji nweta ndị a adịchaghị atụmatụ free. Eeh, sistemụ ndụ ndụ chọrọ ndenye aha ego. Mana tụlee nsogbu nke ndị ọkụ azụ, ngalaba ahụ nyere ọrụ ndị a n'efu.
Yabụ ịchọrọ ịmara ebe ụgbọ mmiri gị dị? Gụnyere ihe ngosi kachasị ọhụrụ gbasara ọnọdụ ihu igwe na enyemaka SOS mberede. Ọ bụrụ ee ee were budata NAVIC ngwa kachasị ọhụrụ site na ebe a na nhọrọ nhọrọ otu pịa.
Isi Njirimara nke ngwa
Ingwụnye Apk na-enye ọtụtụ atụmatụ.
Gụnyere SOS Mberede Mberede, Ọkachamara Weather kacha ọhụrụ na Sistemụ Navigation n'efu.
N'aka ngwa na-arụ ọrụ were were na offline mode.
Maka Bridge Bridge, INCOIS ga-enye ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye.
Kedu nke ga - enyere aka na - eduga azụ ma na - anata nzere emelitere ka ọ dị mfe.
Ndebanye aha dị mkpa maka ịnweta ọrụ.
Ọ naghị akwado mgbasa ozi ndị ọzọ.
The ọrụ interface nke App dị mfe.
Etu aga-esi Download Ngwa
Na usoro nke nbudata emelitere mbipute nke ngwa faịlụ. Ndị ọrụ ekwentị nwere ike ịtụkwasị obi na weebụsaịtị anyị n'ihi na anyị na-enye naanị ezigbo ngwa ọdịnala. Iji jide n'aka na onye ọrụ na-ọbịa na nri ngwaahịa.
Anyị na-etinye otu faịlụ ahụ na ngwaọrụ gam akporo dị iche iche. Ozugbo anyị ji n'aka na ọ dị mma ma kwụsie ike iji, mgbe ahụ anyị na-enye ya n'ime ngalaba nbudata. Iji budata NAVIC App nke kachasị ọhụrụ, biko pịa na njikọ njikọ ebudatara.
Nwekwara ike ịchọrọ ibudata
N'etiti usoro igodo ndị ọzọ gụnyere map akwụkwọ. Anyị na-akwado onye ọkụ azụ nke India ka ọ wụnye NAVIC Apk site ebe a n'efu. Ọ na-enye naanị ozi ziri ezi na nke a pụrụ ịdabere na ya na-akwụghị ụgwọ ọ bụla. Mgbe nbudata ma ọ bụrụ na ị na-eche ihu ọ bụla nke, na-eche free ịkpọtụrụ anyị.
Categories Apps, Maps & Navigation Tags NAVIC, NAVIC ngwa, NAVIC Ngwa, NAVIC Maka gam akporo Mail igodo
Blob Runner 3D Apk 4.5.30 Budata maka gam akporo 2022
Nbudata Top1TOTO 2022 maka gam akporo [ cha cha n'ịntanetị]